Degmadeennu waxay si dhab ah u tixgelisaa nabadgelyada dugsiga. Waxaan waqti iyo xoog ku qaadnaa sanad kasta annagoo la shaqeyneyno fulinta sharciga maxalliga ah si aan dib ugu eegno qorshooyinka deg-degga ah ee dugsiga, tababarno shaqaalaha, laylisyada carbinta amniga ardayda, iyo kordhinta amniga dhismayaashayada. Waxaan sidoo kale la shaqeynaa Caafimaadka iyo Badbaadada Dadweynaha ee Gobolka Washington iyo Xafiiska Sheriff si loo sameeyo baaritaanno nabadgelyo oo ku saabsan xarumaheena, tababarno shaqaalaheena, iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ee bulshadayada.
Iyada oo qayb ka ah qorshaynta deg-degga ah waxay degmadu ku samaysay qiimeyn ballaaran dhammaan afarta aag ee qorshaynta dhibaatada dugsiga, sida ay ku talisay Waaxda Waxbarashada ee Mareykanka, oo ay ku jiraan:
Ka-hortagga iyo yaraynta
Wax ka qabashada afartan aag waxay yareyneysaa halista waxayna wanaajineysaa jawiga iskuulka - iyadoo sare u qaadeysa awooda ardayda inay wax bartaan. Shaqadayada waxaa ka mid ah dadaallo kala duwan, sida:
Qiimaynta gudaha ee amniga, amniga iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah
Wadashaqeyn horumar leh oo udhaxeysa degmada dugsiga iyo wakaaladaha badbaadada dadweynaha ee deegaanka
Tababar la siinayo shaqaalaha degmada
La cusbooneysiiyey lana ballaariyey qorshooyinka dhibaatada iskuulka
Habab la xoojiyay oo ku saabsan carbiska degdegga ah ee dugsiga iyo laylisyada
Soo-saaris taxane ah fiidiyowyo tababbarka amniga dugsiga ah oo loogu talagalay tababbarka ardayda iyo shaqaalaha
Dhammaan dhismayaasha dugsigeennu waxay leeyihiin kontoroollo laga soo galo. Albaabada dibedda ee dhismaha waa xiran yihiin booqdayaashuna waa inay ka soo galaan xafiiska weyn ka hor inta aysan ku buuxin dhismaha intiisa kale. Nidaamyada isdhexgalka fiidiyowga ayaa sidoo kale laga isticmaalaa qaar badan oo ka mid ah dugsiyadeenna, taas oo u oggolaanaysa shaqaalaha iskuulka inay arkaan qofka codsanaya soo gelitaanka dugsiga ka hor inta aysan ku dhejin dhismaha. Mar alla markii la oggolaado gelitaanka xafiiska, dhammaan soo-booqdayaasha waxaa laga codsanayaa inay muujiyaan aqoonsi sawir leh oo lagu dhex maro nidaamka maareynta booqdayaasha si loo aqoonsado shakhsiyaadka halista u keeni kara ardaydeena. Sarkaalka Kheyraadka Dugsiga (sarkaal boolis hubeysan oo ka tirsan waaxaha booliska ee xaafadeena) sidoo kale wuxuu ku jiraa mid kasta oo ka mid ah dugsiyadeena dhexe iyo dugsiga sare maalin kasta.
Sannad walba ardaydeena iyo shaqaalaheena waxay kaqeyb qaataan shan leylis qufulka iyo shan leyliska dabka waxaanan diiwaan galineynaa waxyaabihii aan soo ogaannay (wixii sifiican uqabsoomay iyo wixii aan kusii wanaajin lahayn.) Leyl daadgureyn dhisme ah ayaa waliba laqabtaa sanadkasta. Dugsi kastaa wuxuu kaloo leeyahay koox ka jawaabeysa Xaaladda Degdegga ah ee Dhisme oo kulmaya sanadka oo dhan si ay dib ugu eegaan dhaqamada amniga iyo isku dubaridka qorshayaasha dhismaha.